ठाउँ सुरक्षित गर्न आधुनिक सानो अपार्टमेन्ट मा, कोठा बीच ढोका तह चलाउनुहोस्। खोल्ने वा पर्खाल कपडा बन्द गर्दा तिनीहरूले एक पारी प्रतिनिधित्व गर्छ। तह ढोका भित्री शास्त्रीय डिजाइन झूल को एक वैकल्पिक embodiment छन्। को वाल्व शीर्षकमाथिको को समयमा, एक देखि भिन्न जो धेरै गर्न नम्बर, को गाइड साथ आफ्नो आन्दोलन प्रदर्शन। तिनीहरूलाई को स्पेस बचत लाभ बाहेक गुणस्तर, कार्यक्षमता र गतिशीलता हो। तिनीहरूले एक स्क्रीन, विभाजन वा धेरै क्षेत्र मा एक कोठा विभक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तह ढोका, कुनै पनि अन्य जस्तै मात्र स्पेस विभाजन, तर पनि घर वा अपार्टमेन्ट, कार्यालय को भित्री र कुनै पनि अन्य कोठा को अभिन्न भाग फारम। डिजाइन को छनोट फर्नीचर वा वालपेपर किन्न भन्दा कुनै कम ध्यान दिएर प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
तह ढोका छनौट लागि मुख्य मापदण्ड
सबै को पहिलो, यो सामाग्री को विकल्प हो। प्राकृतिक काठ र विकल्प को MDF प्रकार: त्यहाँ दुई प्रमुख समूहहरू छन्। अझ ठोस र आकर्षक उपस्थिति भएको एउटा लेख, काठ को गरिनेछ, तर यसको मूल्य विकल्प भन्दा धेरै उच्च छ।
MDF निर्माण को प्रयोग महंगा समकक्षों सौंदर्य प्रकारको गर्न कमसल छैन, बाहेक, तिनीहरूले Windows र फिटिंग सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
तह ढोका-बाजा शटर र अंधा संयोजन। आफ्नो संरचना तेर्सो disposed रेल र बलियो प्लेट (lamella) (आन्दोलन therealong रोलर लागि आवश्यक) समावेश छन्। कोडांतरण र यस्तो लेख को माउन्ट अंधा को स्थापना मिल्दोजुल्दो छ। परमवीर चक्र प्यानल, MDF र काठ को सबै प्रकार को एक समान सिस्टम गरे। एक प्यानल खोल्दा शटर एक बाजा जस्तै पर्खाल जाँदैछन्।
तह ढोका यस प्रकारको भान्सा, भोजन कक्ष, कार्यालय वा पुस्तकालय स्थापित गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले सामान्यतया छोटो-बस्ने हो, तर जीवनकालमा गुणस्तर फिटिंग बढाउन सक्छ। टिका, वसन्त तंत्र उच्चतम गुणस्तर को हुनुपर्छ। रंग र प्राकृतिक सामाग्री अनुकरण गर्दै एक किसिम कुनै पनि वातावरण मा आफ्नो स्थापना गर्न अनुमति, र तपाईं डिजाइन शोधन को एक वास्तविकता बनाउन सक्छ।
यस्तै डिजाइन को अर्को प्रकार ढोका वा नोटबुक स्क्रिन तह छन्। तिनीहरूले, दुई ढोका छन् अधिक विश्वसनीय र सरल, तर केहि भारी निर्माण हो। को प्यानल को चौडाई जडान लूपहरूको थप शक्तिशाली छन् अधिक छ। आफ्नो मदत पाएर तपाईं कोठा दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। यो डिजाइन खुलेर आधुनिक घरहरू कुनै पनि भित्री मा फिट।
काठ, परमवीर चक्र, MDF को निर्माण को लागि प्रयोग सामाग्री। लागत र "bunching" र एउटै बारेमा "पुस्तकहरू"। विभिन्न widths को खण्डहरू धेरै मूल हेर्न। आफ्नो विनिर्माण मा पारंपरिक ढोका लागि जस्तै सामाग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। को रोलर्स यसलाई वजन गर्न सजिलो बनाउन मा तथापि, लोड कम गर्न निर्माताहरु। अक्सर ग्लास वा प्लास्टिक प्रयोग मुख्य सामाग्री, मामला डिजाइन नेत्रहीन गर्न अनुमति जसमा एउटा सानो कोठा बनाउँछन् रूपमा।
- एक सानो जीवन। यो विरल प्रयोग क्षेत्रमा तिनीहरूलाई स्थापना गर्न उचित छ।
- थप होसियार ह्यान्डलिङ आवश्यक पर्दछ।
- तापमान उतार चढाव adversely को canvases असर गर्न सक्छ। तिनीहरूले सञ्चालन मा विकृत र जाम हुन सक्छन्।
पर्खालहरु लागि अमेरिकी वालपेपर: मुख्य लाभ
यो ploek र "फलाम" सफा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो
आर्थिक स्कूल, र आफ्नो विकास
Skiathlon - यो के हो? नियमहरूमा skiathlon के हुन्?
के र कसरी एक आंतों संक्रमण लागि एन्टिबायोटिक लिने?
अनाज को लाभ
लडकों लागि जाडो जूता - यो दराज को एक महत्वपूर्ण भाग